Indaneti yezvinhu - Pandawill Technology Co, Ltd.
Iyo Indaneti yezvinhu (IoT) iri kutora chimiro. Kazhinji, IoT inotarisirwa kupa kubatanidza kwepamberi kwemidziyo, masisitimu, uye masevhisi ayo anodarika michina-kune-muchina kutaurirana (M2M) uye inovhara akasiyana maitiro, madomeni, uye mashandisirwo. ), inotarisirwa kuunza otomatiki mune angangoita ese masango. Inofungidzirwa kuti panenge paine anosvika mabhiriyoni makumi maviri nematanhatu zvigadzirwa paInternet yezvinhu na2020. Iko kugona kwekubatanidza zvigadzirwa zvakadzika zvine CPU shoma, ndangariro uye zviwanikwa zvemagetsi zvinoreva kuti IoT inowana zvinoshandiswa munenge munharaunda dzese. Heano maitiro makuru eInternet yezvinhu.
Kuongorora kwezvakatipoteredza mashandiro eIoT anowanzo shandisa masenenzi kubatsira mukuchengetedza nharaunda nekutarisa mweya kana mvura mhando, mamiriro emuchadenga kana ivhu, uye inogona kusanganisira nzvimbo senge kutarisa mafambiro emhuka dzesango nenzvimbo dzavanogara.
Kuvaka uye Kumba Kushandisa
Zvigadzirwa zveIoT zvinogona kushandiswa kuongorora uye kudzora michina, magetsi nemagetsi masisitimu anoshandiswa mumhando dzakasiyana dzezvivakwa (semuenzaniso, paruzhinji uye pasiri, maindasitiri, masangano, kana pekugara. Dzimba dzinozvigadzirira, senge mamwe masisitimu ezvivakwa, anowanzo shandiswa dzora mwenje, kudziyisa, kufefetedza mweya, kutonhodza mweya, zvishandiso, masisitimu ekutaurirana, varaidzo uye ekuchengetedza maturusi ekugadzirisa zvirinani, kunyaradza, kugona kwesimba, uye chengetedzo.
Kubatanidzwa kwesystem uye actuation masystem, akabatana neInternet, anogona kugadzirisa simba rekushandisa rese.Zvinotarisirwa kuti zvishandiso zveIoT zvichabatanidzwa mumhando dzese dzemidziyo inopedza simba uye nekugona kutaurirana nekambani yekushandisa yekushandisa kuitira kunyatso kuenzanisa kugadzirwa kwesimba uye kugoverwa.Sezvishandiso izvi zvakare zvinopa mukana kune vashandisi kudzora kure zvishandiso zvavo, kana pakati nepakati kuzvibata kuburikidza neyakavakirwa mwaka interface, uye kugonesa epamberi mabasa senge kuronga.
Zvekurapa uye Hutano Maitiro
Zvigadzirwa zveIoT zvinogona kushandiswa kugonesa kure kure kwehutano kutarisa uye masisitimu ekuzivisa ekukurumidza Aya maratidziro ehutano ehutano anogona kubva pakudzvanywa kweropa uye nemoyo wekutarisa mamonitha kusvika kune epamberi michina inokwanisa kuongorora akanangana anodyara, senge pacemaker kana epamberi ekunzwa zvinobatsira. Nyanzvi dzakasarudzika dzinogona zvakare kuve dzakagadzirirwa mukati menzvimbo dzekugara kuti utarise hutano pamwe nekugara zvakanaka kwevakuru. vagari, ukuwo vachiona kuti kurapwa kwakakodzera kuri kupihwa nekubatsira vanhu kuti vadzokezve kufamba kwakarasika kuburikidza nekurapa futi.Zvimwe zvigadzirwa zvevatengi zvinokurudzira kurarama zvine hutano, senge, zviyero zvakabatana kana vanopfeka moyo vanoongorora, zvakare mukana neIoT.